October 2018 « A.S.M.A
ထိုင်းနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင်ပညာသင်ယူနေကြသော A.S.M.A ရခိုင်ကျာင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်းနိုင်ငံ)မှ
မြောက်ဦးမြို့ ၊ မြတန်ဆောင်းပညာဒါနကျောင်းရှိ ပညာဆည်းပူးနေကြသောကလေးသူငယ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပညာဆည်းပူးခွင့်ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း
မြတန်ဆောင်းဆရာတော်ဘုရား၏ အနာဂါတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေမှုများကို အသိအမှတ်ပြုလို၍လည်းကောင်း
မိမိတို့ A.S.M.A ညီတော်နောင်တော်များမှ စုပေါင်းစုဆောင်းကာ ပညာပါရမီကုသိုလ်တစ်ရပ်အဖြစ် အလှူငွေ ၁၄၉၀၀၀၀ိ/(ဆယ့်လေးသိန်းကိုးသောင်းကျပ်) ကို ၉.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
အလှူရှင်များမှ မိမိတို့၏လှူဒါန်းမှုများကို ဝမ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြရန် ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
5:30 AM Share:
A.S.M.A နှင့် Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand) တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော “Academic Writing Course” သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာပါရမီကုသိုလ် အလှူတော်ငွေ ဘတ် 1,5000 တိတိကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးပါသော ဒေါက်တာအရှင် နာယက (USA) အား A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ အထူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ပညာအလင်းရောင်ဖြင့် လောကကို လင်းစေအံ့။
( ပညာ လောကသ္မီံပဇ္ဇောတော )
A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ။
A.S.M.A နာယကဆရာတော် အရှင်သုန္ဒရ
A.S.M.A နှင့် Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand) တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော “Academic Writing Course” သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာပါရမီကုသိုလ် အလှူတော်ငွေ ဘတ် 3,000 တိတိကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးပါသော အလှူရှင် A.S.M.A နာယကဆရာတော် အရှင်သုန္ဒရ B.A., M.A ( Eng-Inter) အား A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ အထူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
2:52 AM Share:
အရှင်ဝိယတ္တ (Siam University)
A.S.M.A နှင့် Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand) တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော “Academic Writing Course” သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာပါရမီကုသိုလ် အလှူတော်ငွေ ဘတ် 2,000 တိတိကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးပါသော အလှူရှင် အရှင် ဝိယတ္တ B.A (Hons)., M.B.S., (Hong Kong)., M.B.A ( HR) အား A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ အထူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
2:47 AM Share:
ဦးပညာသာရဗောဓိ B.A., M.A (IBSC)
A.S.M.A နှင့် Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand) တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော “Academic Writing Course” သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာပါရမီကုသိုလ် အလှူတော်ငွေ ဘတ် 6,500 တိတိကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးပါသော အလှူရှင် A.S.M.A -Founder ဦးပညာသာရဗောဓိ B.A., M.A (IBSC)အား A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ အထူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
2:44 AM Share:
အရှင် ဂန္ဓသာရ B.A., M.A (MCU)
A.S.M.A နှင့် Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand) တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော “Academic Writing Course” သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာပါရမီကုသိုလ် အလှူတော်ငွေ ဘတ် 1,000 တိတိကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးပါသော အလှူရှင် A.S.M.A-ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ အရှင်ဂန္ဓသာရ B.A., M.A (MCU)အား A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ အထူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
2:37 AM Share:
အရှင်ကောသလ္လ B.A., M.A (Linguistics)
A.S.M.A နှင့် Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand) တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော “Academic Writing Course” သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာပါရမီကုသိုလ် အလှူတော်ငွေ ဘတ် 1,000 တိတိကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးပါသော အလှူရှင် အရှင်ကောသလ္လ B.A., M.A (Linguistics)အား A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ အထူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
2:36 AM Share:
အရှင်ဉာဏဓဇ B.A (Eng)
A.S.M.A နှင့် Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand) တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော “Academic Writing Course” သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာပါရမီကုသိုလ် အလှူတော်ငွေ ဘတ် 1,000 တိတိကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးပါသော အလှူရှင် အရှင်ဉာဏဓဇ B.A (Eng)အား A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ အထူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
2:33 AM Share:
Speech Contest on the 79th Martyr's Anniversary of Ven. U Ottama
Arakan Student Monk Association, Thailand
(၇၉) ကြိမ်မြောက် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အထိမ်းအမှတ် စကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် အသီးသီးတွင် တက်ရောက်ပညာဆည်းပူးနေကြသော ရခိုင်ကျောင်းသား ရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပအပ်သော (၇၉)ကြိမ်မြောက် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အထိမ်းအမှတ် စကားပြောပြိုင်ပွဲကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် လူကြီးမင်း (အသင်းကိုယ်စား)အား တက်ရောက်ပါရန် ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်း)မှ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် - ၈.၉.၂၀၁၈
နေရာ - မဟာချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသလိုလ်၊ ပင်မဌာန
အချိန် - နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီ
နေ့လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီ
ဆက်သွယ်ရန်= ဦးပညာဇောတ= ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်= ၀၉၅၀၀၆၉၇၆၄
= ဦးတေဇသီရိ = ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော်= ၀၉၄၄၁၉၇၁၅၉
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အထိမ်းအမှတ် စကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ
ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့နှင့် မဟာချူလာတက္ကသိုလ် Language Institute တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် Academic Writing Course သို့ ဘန်ကောက်မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူတစ်ချို့လာရောက်လေ့လာ။
Some students in Bangkok came and visited our Academic Writing Course which run in collaboration with Language Institute of MCU together with Ajhan Phra Maha Cittapalo, Vice Director at Language Institute and Students Affair.
It's the third day of the course.
Academic Writing Course သို့ ဘန်ကောက်မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူတစ်ချို့လာရောက်လေ့လာ
2:27 AM Share:
Sayadaw U Ottama (28 December 1879 –9September 1939) was an Arakanese Theravada Buddhist monk, author andaleader of the Burmese independence movement during British colonial rule. He was imprisoned several times by the British colonial government for his anti-colonialist political activities. U Ottama died in Rangoon Hospital on9September 1939. He is considered one of the national heroes of modern Myanmar.
2:24 AM Share:
အရှင်ပညာသီရိ B.A (Hons)., M.B.S (Hong Kong)
A.S.M.A နှင့် Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University(Thailand) တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော “Academic Writing Course” သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာပါရမီကုသိုလ် အလှူတော်ငွေ ဘတ် 500 တိတိကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးပါသော အလှူရှင် အရှင်ပညာသီရိ B.A (Hons) M.B.S (Hong Kong) အား A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ အထူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ကျေးဇူးတော်အရှင် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များမှ သွားရောက်ဖူးမျှော်။
၁ / ၉ / ၂၀၁၈
ဘန်ကောက်မြို့၊ Bumrungrad International Hospital မှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေသော A.S.M.A အသင်းကြီး၏ ရာသက်ပန်သြဝါဒါစရိယ၊ ကျေးဇူးတော်အရှင် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား A.S.M.A အသင်းဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အသင်းဝင်သံဃာတော်များမှ သွားရောက်ဖူးမျှော်ကာ ကျန်းမာရေးသတင်း မေးလျှောက်ပြီး ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှ သြဝါဒခံယူခဲ့ကြသည်။
ဆရာတော်ဘုရားကြီး ပြန်လည်ကျန်းမာလာသည်ကို ဖူးတွေ့ရ၍ ကျောင်းသားသံဃာတော်များမှ အတိုင်းမသိဝမ်းသာကြပါသည်။
အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ၍ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ သကြပါသည်။
A.S.M.A - Information
Thailand, 01. 09. 2018
2:19 AM Share:
2:16 AM Share:
ဒေါက်တာ အရှင်နာယက ( USA) နှင့် A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်း) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ။
၃. ၉. ၂၀၁၈
ဒေါက်တာအရှင်နာယက ( U.S.A) နှင့် A.S.M.A ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(Thailand)တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ၊ သြဝါဒခံယူပွဲ အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ မဟာချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်တွင် တခမ်းတနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဒေါက်တာအရှင်နာယက(အမေရိက)မှ အမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် အနောက်ဥရောပရှိ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့် အသိပညာဗဟုသုတများ ၊ ရဟန်းတော်များနှင့် လူသားအကျိုးပြုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရအခန်းကဏ္ဍများကို မေတ္တာစေတနာကြီးမားစွာဖြင့် ရှင်းလင်းမျှဝေ သြဝါဒပေးခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်ရဟန်းတော်များမှလည်း သိလိုသည်များကို ဒေါက်တာအရှင်နာယက ဆရာတော်ဘုရားအား မေးမြန်းလျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။
မဟာချူလာတက္ကသိုလ်၏ Language Institute နှင့် A.S.M.A (Thailand) တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားသော Academic Writing Course (AWC) သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာဒါန မ့တည်ငွေ ဘတ် ၁၅၀၀၀ ( တစ်သောင်းငါးထောင်) လှူဒါန်းပေးပါသော ဒေါက်တာ အရှင်နာယက(USA) အား A.S.M.A (Thailand) အသင်း ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်မှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ။ ၃ . ၉. ၂၀၁၈
2:13 AM Share:
၆. ၉. ၂၀၁၈
ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ မဟာချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်၌ A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပအပ်သော (၇၉) နှစ်မြောက် အာရှနေဝန်း ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနားနှင့် စကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ (Speech Contest) ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ရွှေသဒ္ဓါဖြင့် မ့တည် လှူဒါန်းကြသော အလှူရှင်များစာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဂုဏ်ပြုဖော်ပြလိုက်သည်။
အလှူရှင်များ စိတ္တသုခ ကာယသုခ ပြည့်ဝကြပါစေ။
2:10 AM Share:
Academic Writing Course Closing & Certificating Ce...
cademic Writing Course ပ်ိတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီး...
ဒေါက်တာ အရှင်နာယက ( USA) နှင့် A.S.M.A ရခိုင်ကျောင...
ကျေးဇူးတော်အရှင် အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ...
Academic Writing Course သို့ ဘန်ကောက်မှ ကျောင်းသား...
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အထိမ်းအမှတ် စကားပြောစွမ်းရည်ပြိ...